अनायासका पानाहरु : कथा– निलो साइकल
अनयासका पानाहरु गजल संग्रह
रामकृष्ण पौडेल 'अनायास'
कथा– निलो साइकल
रामकृष्ण पौडेल ''अनायास''
समयले पनि एउटा कोल्टे फेरीसक्यो यतिबेला त ! साईकल को घंटी ढोका अगाडि हिजो अस्ती गुन्जीई सक्थ्यो निरास हुँदै कोठा भित्र पस्छु अनि एकै छिन टेबलमा फिजाइएका किताबहरु एकएक गरी हेर्छु पन्ना पल्टाउँछु, प्रत्येक शब्द शब्दमा उनकै प्रतिबिम्ब देख्नु फेरी बन्द गर्छु । अनि हत्तपत्त बाटोमा साइकलको आवाज सुन्छु र बाटो तर्फ दौडन्छु जाँडियाँ पो परेछ रोकेर व्यर्थै निउपो खोज्न थाल्छ म सुरुक्क फेरी फर्कन्छु घडी हेरेको ९ बजेर २७ मिनेट भएको रहेछ । २०६० सालमा के को मोवाइल लिन पाइन्थ्यो नत्र फोन हजार चोटी हान्थे होला अब एसएलसी आउन जम्मा ५ दिन बाँकी छ । आज मेरो घरमा नौ दिन पुग्थ्यो प्रतिभा बस्ने गरी आउन थालेको हामी रात अबेरसम्म पढ्थ्यौँ, अनि निन्द्राले अतिनै आँखा हेर्न नदिए म जहाँ पढ्थे त्यही निदाउँथ्ये प्रतिभा मेरी वहिनीसँगै सुत्थीन् म गणितमा जान्ने थिए प्रतिभा अँग्रेजीमा धेरै अगाडि थिइन् । हामी एक अर्कालाई पढाउँथ्यौँ पढ्थ्यौँ ट्यूसन पनि सँगै पढ्थ्यौँ । कक्षा कोठा पनि एउटै थियो । चारवटा सेक्सन भए पनि, स्कूल जाँदा मन्दिरको चोकमा भेट हुन्यौँ र छट्टीन्थ्यौँ पनि । यो क्रम पनि झण्डै दुई वर्ष चल्यो, तर रातीसँगै पढ्न लागेको धेरै समय भएको थियो । आज मेरो घरमा साइकलको घण्टी बजेन किनकि प्रतिभा खाना खाएर सधै आठ बजे मेरो घरको आगनमा सानो निलो साइकल लिएर आइ पुग्थिन् र घण्टी बजाउँथिन। म हत्तपत्त साइकल राखिदन कुद्थे, आमाले प्रतिभा आएको देखर दुई ओटा गिलासमा दुध बोकेर आउनुहुथ्यो । विचारमा आमा आज एउटा गिलासको दुध त्यसै फर्काउनु भयो । कतै विरामी पो परिन् कि त आउनु पर्ने हो भन्दै जानु भयो ।
सम्बन्ध पनि त्यति धेरै प्रगाढ भै सकेछ आज बल्ल थाहा । भयो यति गहीरामइमा यति गहिराइमा पर्दा पनि पत्तै भएनछ । मुटु त लगभग एउटै भै सकेछ खै कहिले यसरी गाँसिएछ थाहै भएन । अव त सास फेर्न नै अप्ठ्यारो भै सक्यो मणि हराएको नागको झै एकै ठाउँमा फन्को कतिमारे कति मेरो सम्पूर्ण परिवारको सदस्यको मन पनि जितिसकेकी थिइन् उनले । सायद लाग्छ । उनलाई पनि सामान्य नै लाग्थ्यो मेरो घर अनि परिवार र मेरो घर परिवारले पनि समान्य नै मान्थ्यो । त्यसैले होला एक दिन त त्यस्तै परेर राती साँडे नौ (९ः३०) बजेतिर शंकरलाई लिन पठाएको थिए ऊ पनि हाम्रो आत्मीयता देखेर छक्क पथ्र्याे । मेरो तड्पाइ देखेर साइकल कुदाई हाल्थ्यो प्रतिभाको घरतिर अनि पछाडी राखेर ल्याई हाल्थ्यो । सायद घर पनि नजिक नै थियो । पढाइमा ठ्याक्कै शून्य नै थियो । कसो कसो १० मा पुग्यो ए.एल.सी. त विचराको फलामकै ढोका थियो केही क्निको करले गर्दा पनि मेरो कुरा काट्दैनथ्यो । राति निरन्तर दिदैन थियो कहिलेकाँही आइ पुग्थ्यो । आज त किन आउँथ्यो र ऊँ पनि मलई मर्का परेको बेलामा फकाउने बेला मात्र आउँथ्यो नि । दुई वर्ष वितेको पत्तै भएन, तर त्यो मेरा लागि एक वर्ष भन्दा पनि लामो बनेको थियो । माया र प्रेममा निकै तड्पिएर पागल बनेका कथा सुनको थिएँ तर वास्तवमा आज आँफैमा अनुभूति हुँदैन । जाउँ भने राति ११ बजेको छ २०६० सालको चैत्र ५ गते मेरो कालो रात होला । बाहिर आर्मीहरुको गस्ती पनि शुरु भए जस्तो छ । बुटको आवाज सुन्छु, हत्तपत्त झ्याल बन्द गर्छु अनि स्वास पनि भित्रभित्र फेर्छु। द्वन्द पनि निकै चर्केको थियो । झ्यालबाट नै गोली छिर्ने होकि भन्ने डर कहिलेकाहीँ त विनासित्ति बस्तीका मान्छेलाई निन्द्रबाटै उठाएर लैजान्थे, विचारा कति फर्किए कति बेपत्ता । अझ त्यो भन्दा पनि मेरो घरमा अर्का आर्मी पक्षका विद्रोहीहरु त उनकै घर झै गरी थर्काई थर्काई खाने, बस्ने सुत्ने गथ्र्ये, त्यतिबेला दिएको दुःखका कारणले अचेल त मुखमा हेर्न पनि मन लाग्दैन । होस् आफ्नो मनमा राँको बलेको थियो ।
विहान पो भएछ कतिबेला निदाएँ पत्तै भएन । हेर निधारमा कलमको विर्काेको डाम उठेपछि पो दुख्न थाल्यो त । केको मुख धुने उठेर नाग मणि खोज्न कुदेझैँ गरी म पनि बुझ्न हानिन्छु प्रतिभाको घरमा । धारामा प्रतिभाकी भाउजु पनि पानी भर्दै थिइन्, बाबु किन आउनु भयो यति विहान तपाईं ? अनि प्रतिभा खोइ त ? म झसंङ्ग हुन्छु पूरा वर्माण्ड नै पर्लय भएजस्तो सारा आकाश खसेजस्तो हुन्छ । थाहा भयो प्रतिभा हिजो राति अपहरणमा परिछन् । घरकाले त पढ्न गएकी छोरी केको अपहरण राति सोच्ने कुरै भएन र हल्ला खल्ला मच्चियो, निकै मान्छेको भीड देखिन थाल्यो विचरा प्रतिभाको आमाको त आधा होस गुमी सक्यो, त्यो भन्दा त मेरो नै होस गुमिसक्यो । पत्तो छैन कुन पक्षले लगेको हो । सधै हतियार बोकेर सिकार गर्ने शिकारीलाई के थाहा घर, परिवार ममता अनि आत्मीयता वास्तवमा उनीहरुको आत्ममा राक्षसले बास गरेको हुन्छ होला र त निर्दाेश अवोधलाई बेपत्ता पारी निर्मम यातना दिन्छन् । सुन्छु कतिले त आफ्नो राक्षसी यौन प्यास मेटेर चरम यातना दिन्छन् नारीलाई । अन्तिममा उसको सारा शक्ति र पूरै अस्तित्व मेटेर धर्तीबाट विदा दिइन्छ । त्यतिबेला पूरै शक्ति पलाए झै हुन्छ । जसले लगेको हो त्यसैलाई मेटाइ दिन्छु, बरु आँफै मेटिन किन नपरोस् ।
धेरै मान्छेको धेरै आउँछन्, कतिले त आश मेट्न भन्छन् त कतिले फर्किने झिने आसा देखाउँछन् । विभिन्न कुराहरु सुन्दा सुन्दै म आँफै घुमेको हो या यो पृथ्वी नै घुमेको हो पत्तै पाउँदिन । राति खाना खाएर घरबाट हिँडेकि प्रतिभा निलो सानो साइकलसँगै अपहरणमा
परिछन् । मेरो मनमा हजारौँ तर्क वितर्कहरु उठ्न थाल्छन्, के गरेका होलान् र के गर्दै छन् होला ? त्यसै विचमा क्षितिज पारी बाटोमा सानो आकृति देखा पर्दछ । आकृति बाटो हुँदै नजिक नजिक आइ पुग्छ । त्यो आकृति पक्कै लाग्छ मलाइ बास्तमा निलो साइकलमा प्रतिभा नै आएकी रहिछन् । म त एक्कासी उफ्रिएँ खुशीको सीमा रहेन ममा । सबै मान्छेहरु मुखामुख गर्न लागे। कतिले मृत्युको मुखबाट पनि फर्किइ कतिले त कति जनाको इच्छा मेटाएर आइ, जे जस्तो होस् प्रतिभा आउनुमा नै मेरो लागि ठूलो थियो । बेलिविस्तार लगाउन लागिन् थाहा भयो द्वन्द्वकाल भएकाले होला राति एक्लै हिँडेकाले झण्डै सुरक्षाकर्मीले सोधपुछका लागि इज्जतका साथ लगेको रहेछ र विहानै छाडि दिएछ । मेरो मुटुले विस्तारै रक्तसञ्चारमा सुचारु रुप दिन थाल्यो । नसाहरु बल्ल चलबलाउन थाल्छन् एक हिसाबले त मेरो होस नै गुमि सकेको थियो । स्थिति सबै सामान्य बन्दै जान्छ ।
त्यसपछि मेरो घरमा राती आउनका लागि अनुमतिमा ठूलै तगारो आउँछ परिवारबाट । तर प्रतिभा के मान्थिन जिद्धि थिइन्, फेरी उही शंकरको काम आइ प¥यो बेलुका सधैँ ल्याउने । हुन त एस.एल.सी. सम्म मात्रै हो भन्थ्यो । म पनि शंकरको लागि रातभरी चिट बनाइदिन्थेँ नि ! ऊ सुत्न पाउँथ्यो र बिहान उसको लागि चिट तयार हुन्थ्यो । परीक्षामा चिट चोर्न माहिर थियो । मख्ख पनि पथ्र्याे किन कि मैले बनाएको चिटबाट लगभग धेरै पथ्र्याे । भोलीबाट एस.एल.सी. शुरु हामीले परीक्षा पनि दियौँ, अन्तिम दिन परीक्षा सकेर आउँदै थियौँ बाटोमा । कालै लटरम्मै काफल पाकेको देख्यौँ, एक हिसाबले काफलकै खेति थियो त्यहाँ । म प्रतिभा, शंकर, मुना, विजया, लक्ष्मी, गोपाल सबै काफल घारी भित्र पस्यौँ त्यहाँ गएर काफल खान्थ्यौँ र एक अर्काले काफल टिप्दै हान्थ्यौँ, काफल निचथ्र्याै र कपडा भरी त्यसको रस हालिदिन्थ्यौँ । अझ त प्रतिभाको ड्रेसको सट देखिएकै थिएन । जिउँमा पनि हालिदिएँ कता कता भिज्यो पत्तै भएन काफलको रसले । आज पनि हेर्छु त्यो सट उनले पनि भिजाइ दिएकि थिइन् मेरो सट काफलको रसले । हाम्रो भोक, तीर्खा र सारा सन्सार एक अर्काको स्पर्श मायाले विर्सिएका थियौँ । हामी आफैमा हराइरहेका थियौँ त्यो घना काफल घारी भित्र ।
घर फर्किएपछि त्यस दिन त्यसै वित्यो । एस.एल.सी. सकिएकाले सन्सार जितेजस्तो लाग्थ्यो । समय विस्तारै क्रमिक रुपमा अगाडि बढ्दै थियो । समयसँगै हाम्रो माया पनि अगाडि बढ्दै थियो प्राय भेट्थ्यौँ, कहिले मन्दिर जान्थ्यौँ कहिले बजार । म कम्प्युटर सिक्न शुरु गरेँ भरतपुरमा । प्रतिभा पनि घरमा अंग्रेजी भाषा सिक्ने बाहना पारेर मलाई भेट्न सँधै आउँथिन् । कता कता डर पनि लाग्थ्यो । सँगै हिड्दा कुरा काट्ने पो हुन् कि, जे होस् कुनै प्रवाह छैन । हामी आफ्नो दिनहरु शुन्दर र स्मरणीय बनाउँदै मायाको पालुवा जलमल गर्दै अगाडि बढिरहेका थियौँ, सबैले हाम्रो माया माथि आँखा पनि उत्तिकै गाडेका थिए । हामी मा माया, प्रेम, मिलन त कहिले रीस एक अर्कामा साटासाट गथ्र्यौँ दिनहरु बितेका पत्तै पाएनौँ । एस.एल.सी.को नतिजा प्रकाशित भयो । हामी सबै पास पनि भयौँ । म प्राविधिक शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रतिर प्रवेशका लागि तयारी भएँ, उनी शिक्षा शास्त्र तिर । हाम्रो पढाइको क्षेत्र भने अलग हुँदा समय पनि हामीबाट धेरै अलग भएको छ । म सदरमुकाम पढ्न जान्थे, उनी गाउँकै प्लस टु मा अध्ययन गर्थिन् । हाम्रो अध्ययनकै कारणले विवस भएर हामी छुट्नि बाध्य रह्यौँ । हामी एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने जस्ता भएका थियौँ । गाउँ, डोल, छिमेक, साथिभाइ हाम्रो सम्बन्ध बारे सबै परिचित थिए । हामी आआफ्नो पढाइमा पनि उत्तिकै मन लगाएका थियौँ । त्यसै क्रममा मेरो समय पनि व्यस्त हुँदै गयो, भेट्न क्रम पनि विस्तारै कम हुँदै जान थाल्यो, दिनभरीको कलेज, पढाइ, थकाइ, साँझ पर्नासाथ भुसुक्कै निदाइ हाल्थ्एँ । विहान उठ्न साथ उही क्रम मेरो हस्पिटलमा ड्युटि, कलेज, परीक्षा त्यस्तै त हो हाम्रो सम्बन्धको बाधक भनेको । त्यही पनि माया त काहाँ कम हुन्थ्यो र विचारा प्रतिभा आफ्ना सपनाहरु भित्रभित्रै सजाउँथिन् होला मसँगको साथ पछि आफ्नो भविष्यको योजना वनाएकी थिइन् होला । मान्छेको सोचाइ, विचार र बुझाइ त हो कहिले काहीँ त चुकि हाल्थ्यो नि । त्यसै क्रममा म पनि विस्तारै दुब्लाउँदै गए । विस्तारै विस्तारै रोगले च्याप्दै गयो । शुरु शुरुमा त त्यति ख्याल नै भएन । समय, खाना र व्यस्तताले गर्दा कमजोरीको अनुभव भए जस्तो लाग्यो । त्यसै क्रममा कलेजले प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि पठाएकै अस्पतालमा जाँच गराएँ । थाहा भयो मलाई त मैले नै काम गर्ने अस्पताल, ल्याव,विरामी अन्य केही बाट टि.वि ९त्गदभच ऋयिकभक० सरेको रहेछ । म टि.वि.को विरामी भएको कुरा थाहा पाउँदा म आफै छायाँबाट खसेजस्तो भएँ । हुन त औषधिले निको हुन्छ भन्ने झिनो आशा त थियो, जे जस्तो भए पनि रोग रोग्नै हो पीडा त भइहाल्थ्यो । घर परिवार,प्रतिभा सबैलाई थाहा भयो । औषधीपनि शुरु गरेँ उक्त क्रममा दुब्लो, कालो, ख्याउटे, खोकिमात्र रहने, बेला बेला ज्वरोले च्याप्थ्यो, साँच्चिकै यस्ता कारणले प्रतिभा मप्रति विस्तारै टाढा हुँदै गएको अनुभूति पनि गर्दै गएको छु र राम्री थिइन् । धेरैले मन पनि पराउँथे, सबैसँग मिल्थिन । त्यसक्रममा मेरो अवस्था, स्थिति र विरामी पना प्रतिभाको व्यवहारले झन् झन् थाला नै परेँ । समय पनि कति निष्ठुरी हुँदै रहेछ । हिजो हामीलाई नजिक बनाउने समय आज छुटाउन पनि सक्दो रहेछ । आफ्नो रोग भन्दा प्रतिभा अरुसँग सम्बन्ध बढाएको जानकारीले मानसिक रुपमै धेरै ग्रसित बन्न पुगेँ । मलाई यसक्रममा लामो समयसम्म दुवैतिरको रोगले विस्तारामै सुतायो । जति जति म घरपरिवार, अस्पताल मेरो साथीको सहयोगले निको हुँदै जान्छु त्यति प्रतिभा म बाट टाढा र अर्कैसँग सम्बन्ध नजिक्याउँदै गएकी पनि थिइन् । यसको प्रमुख दोष मेरो रोग, क्षमता र शारीरिक अस्वस्थता नै थियो । हुन त दिन वित्तै गएका थिए मलाइ उनको यादले बाँच्न पनि लाग्दैनथ्यो । कस्तो स्वार्थी रहेछ उनको मन मैले त सोच्न पनि सक्दिनथे । वस्तमा नारी त कोमल हृदय भएका हुन्छन्, अरुको मर्म, भावना बुझ्न सक्ने
हुन्छन् भन्थे । त्यसैदिन देखि नारी प्रतिको विश्वास केही घटेको महशुस हुन्थ्यो म मा मलाई धेरैले सम्झाउँथे, “आज धोका दिनेले पछि पनि भन्न सकिँदैन । बरु ठिक भयो कृष्ण आज छाडी दिई कमसे कम पछि गएर त तेरो जिन्दगी तहस नहस हुँदैन नि” त्यताबाट हामी खुशी हुनु पर्छ । हुन पनि हो जस्तो लाग्यो मेरो पढाइ सुचारु गरेँ मैले मेडिकल फिल्डको पढाइ पनि पुरा पनि भयो । कहिले काहिँ यादले सताउँथ्यो । पूरानो चिनो हेथ्र्ये त्यै काफलले भिजेको सट, कहिले त रातभरी रोएर बस्थे, कस्तो अभागी रहेछुँ माया पनि गर्न नपाउँने मैले । उनी बसेको कुर्चि टेबुल, सुतेका बेडसिटहरु हेर्दै भक्कानिन्थ्े, कते प्रतिभा छन् कि भनेर तर उसलाई के थहा एउटा सच्च प्रेम के हो तर मैले गरेको छु, किनकि सँगै भएको भए यति धेरै यादमा मुटुमा गेडेको हुँदैनथ्यो होला । कुनै बेला पाएर गमाए पनि वास्तवमा पाउनु भन्दा गुमाउनुमा प्रेमको यथार्थ चित्रण छर्लंग देखिँदो रहेछ ।
म नजिकैको अस्पतालमा जागिर खान थाले यादमा डुबेर क्यौँ रातहरु त्यसै खेर गै सकेको थियो । अब जागिरले पनि व्यस्त बनायो । उता प्रतिभाको पनि उनी मलाई छाडी प्रेम गरेकै केटासँग बिहे भएछ । लगभग २ महिा पछि मात्रै थाहा पाएँ, त्यति नै बेला थाहा पाएको भए बीच बाटोमै गएर भए पनि हेरेर बस्थेँ होला नि, बेहुलीको पहिरनमा कस्ति देखिएकी रहिछन् ? त्यो अवसरबाट पनि वञ्चित भएँ । जे जस्तो भए पनि कुनै बेला खाने गास र बास एउटै थियो नि हाम्रो तर माया कहिल्यै मर्दाे रहेनछ ।
समय,दिन यादहरु टाढा पुगे, जागिरको पनि ४ वर्ष पार गरेँ । एक दिन अचानक प्रतिभा मैले काम गर्ने अस्पतालको बेडमा सुतिरहेको देखेँ । रातो विहेको पहिरन त देख्न पाइन तर आज सेतो पहिरनमा अस्पतालको बेडमा देख्दा आधा आकाश खसेर शरीरि थिचेको अनुभव पाएँ मैले । उनलाई सोधेँ तर उनी कोल्टे फर्केर रुँदै भक्कानिँदै मुख छोपिन् । उसको दाईबाट थाहा पाएँ प्रतिभाको श्रीमान् एच. आइ.भी. भएर मृत्यु भएको रहेछ र प्रतिभालाई पनि ऊ बाटै सरेकाले एच.आइ.भि. संक्रमित भएकि रहेछिन् । त्यसैले गर्दा विरामी परेर आज सेतो कपडामा एच. आइ. भि. संक्रमित विरामी भएर जिउँदो लास सरी लडि रहेकी छिन् । बेलैमा विदुवा अनि विरामी भाग्य र समयले कसलाई कहाँ पु¥याउँछ थाहा हुँदो रहेनछ ।
Posted by ramkrishna at 10:34 PM
Chhabi Chalise July 23, 2015 at 12:23 AM
कथाको मर्म राम्रो छ तर भाषिक सम्पादनमा बिशेष ध्यान दिनु भयो भने सुनमा सुघन्ध हुन्छ !
सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु
नजर साथीको ब्लगमा
नेपालि अनलाइन दैनिक
ONLINE RADIO :: RADIO RIJAN
भर्खर हेरिएका ठाउँहरु
(गजल मंच चितवन)
बडा दशैं २०७० को हार्दिक शुभकामना !!!"
मझेरीले म संग लिएको अन्तर्वार्ता
माया पनि आज आखिर बेकार हुदैछा
कार्यक्रम गजलका थुँगाहरु~११
गजलका थुँगाहरु भाग– एक
नेपाली साहित्य जगतमा एउटा अनुपम प्रयास , तपाई हाम्रा मिलन विछोडका कुरा , कतै मन दुखेका कुरा त कतै माया र प्रेम साटेका ...
गजलप्रेमी मित्रमनहरुलाई नया स्वाद स्वरुप मेरो मित्र अर्जुन पौडेल जीको डिजाईनमा मेरो आवाज सहित गजल हेरी, सुनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछु...
गजलका थुँगाहरु भाग–२
नेपाली साहित्य जगतमा एउटा अनुपम प्रयास , तपाई हाम्रा मिलन विछोडका कुरा , कतै मन दुखेका कुरा त कतै माया र ...
जुम्लाले राधा पौडेलको जीवनलाई नयाँ दिशा दियो ।
मदनपुरस्कार विजेताले देखेको जुम्ला राधा पौडेल सबभन्दा अग्लो ठाउँमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय छ । अलि तल सैनिक ब्यारेक । त्यो भन्दा होेचोमा ...
" नारी" मात्र पीडित छे वा पिडित हुन्छे भन्नू सरासर गलत हो।
मो हन रेग्मी सर, हुन त हजुरको बारेमा म ब्यतिगत रुपमा त्यति जानकार छैन।केहिदिन यता सामाजिक संजाल तथा नेपाली मिडियाहरुमा आइरहेको खबरहरु ...
साहित्यिक मनहरुको ढुकढुकी
शुभकामना सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा